La Dareen Noqoshada Dadka Tabaalaysan iyo Maalimaha Khayriga ah: - Guuguule News Network
“Iyadoo lagu guda jiro Maalimaha ugu Khayrka badan ee islaamka”
Waxa ay beryahanba ku heelanayd Wasiirka Wasaaradda Shaqogelinta, Arrimaha Bushada iyo Qoyska Marwo Hinda Jamac Xirsi (Gaani) dardar gelinta iyo kor u qaadida deeqaha Mucaawimo ee la gaaadhsiinayo dadka tabaalaysan reer Somaliland. Wasiir Hinda oo ku suntan u debecsanaanta iyo caawimaada bulshadeeda ay xilka qaran u hayso ayaa ayaamahan khayrka badan sii laban laabtay Caawimada Qoysaska danyarta ah,
Cusbitaalada Dhimirka iyo Qaaxada kuwaas oo ah meelaha ugu jilicsan bulshadeena Somaliland ee u baahan in la garab taagnaado mar walba.
Wakhti lagu guda jiro maalmihii khayrka laha wakhti hore Subaxnimadi ah ayey gaadhsiisay Wasiirka Wasaarada Shaqada, Arrimaha bulshada iyo Qoyska Marwo Hinda Jaamac Xirsi 200 Qoys oo danyara Hilib iyo Mucaawimo kale Waxaana hawsha khayriga ah kala qayb qaadanayey Haayadda ARC amase Kuwait foundation
Wasiirku waxay Alle uga baridey in uu u naxariisto guud ahaamba Umada islaamka gaar ahaana inta jilicsan ee u baahan taakulada iyo garab istaaga.
Waxay maalintii labaad guda gashay Wasiirku qaybinta Xoolaha Nool.
iyadoo isla maalintaa booqatay xarunta Dhimirka ee Sahan iyo xarunta dadka la nool Baahiyaadka gaarka ah waaxanay halkaas ku gudoonsiisay Xoolo, Dhar, iyo Kabo.
Wasiir Hinda Jaamac Waxay duco iyo baaq u dirtay Bulshada reer Somaliland sidii ay u Caawin lahaeeyn walaalahooda Tabalaysan si ay iyagana ugu noqoto Sadaqo anfacda beri ka maalin.
Wasiirku waxay Alle uga baridey umadaa masaakiinta ah in Alle u Naxariisto
sidoo kalena Waxay baaq u dirtay dadka muxsiniinta ah inay Ogaadaan soona caawiyaan walaalahooda tabaalayaan
Waxay maanta oo Bishu tahay 18-08-2019 Wasaaradda SHAB&Q oo gadhwadeen ka tahay Marwo Hinda ay gaadhsiisay labada xarumood ee kala ah xarunta Dhimirka iyo Xarunta Qaaxada deeq ay wasaaraddu ugu tala gashay kana deeqdaas oo kooban
Dhar, Xoolo iyo noocyada kala duwan ee Raashinka
Waxaanay wasiirku Alle uga baridey in uu ka kor qaado dhibta haysata oo uu caafmad ugu bedelo dadka tabalaysan ee ku jira labadaas xarumood.
qore :-cabdiraxmaan aadan axmed